အားထားရ ာစိတ်ခံစားမှု၏ဘီး – မြန်မာ – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
A. အားထားရာမှာ အနားယူပါ။
ခ။ သံလိုက်အား ဘယ်ဘက်သို့ ရွှေ့သည်။
C. Magnet ကို ညာဘက်သို့ ရွှေ့သည်။
Lenz ရဲ့ စည်းကမ်း
လျှပ်စီးကြောင်း၏ဦးတည်ချက်သည် သံလိုက်၏ရွေ့လျားမှုနှင့် သံလိုက်၏ဝင်ပေါက်များသည် ကွိုင်ဆီသို့ ဦးတည်ပုံနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ induced current နှင့် induced electromotive voltage တို့၏ ဦးတည်ရာကို ဆုံးဖြတ်သည့် စည်းမျဉ်းကို Lenz’s rule ဟုခေါ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်- induced electromotive voltage နှင့် induced current တို့သည် inductive magnetic field ၏ ပြောင်းလဲမှုကို ဆန့်ကျင်ရန် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဖြစ်စဉ်၏အကြောင်းရင်း)။ ပုံ 1 တွင်ဖော်ပြထားသောစမ်းသပ်မှုအတွက် Lenz ၏စည်းမျဉ်းကိုအသုံးချပုံကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံ2တွင် ကွိုင်အလှည့်များကြားရှိ သံလိုက်သည် N pole ဖြင့် ဝင်ရောက်သည်။ inductive သံလိုက်စက်ကွင်း B inductor သည် ဘယ်ဘက်သို့ ဦးတည်ပြီး coil မှတဆင့် flux တိုးလာစေသည်။ Lenz ၏ စည်းမျဉ်းအရ B induced သံလိုက်စက်ကွင်းသည် B inductor ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ဦးတည်နေစေရန်၊ ဤတိုးလာမှုကို ဆန့်ကျင်ရန် flux ကို ဖြစ်စေရမည်။ ထို့ကြောင့် coil မှတဆင့် induced current သည် B inductor တိုးလာမှုကို ဆန့်ကျင်ရန် induced B ကို ဖြစ်စေသော ဦးတည်ချက်ရှိရမည်။
စိတ်ခံစားမှု၏ သံလိုက်ဘီး – စကားလုံးများစာရင်း
စိုးရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ အံ့သြခြင်းများ၊ အံ့သြခြင်း၊ ရိုသေခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ တက်ကြွမှု၊ လွတ်မြောက်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ရွှင်မြူးမှု၊ ရွှင်မြူးမှု၊ မနာလိုမှု၊ ဆော့ကစားမှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ နိမ့်ကျသော၊ ထိခိုက်လွယ်သော၊ စွမ်းအားမရှိသော၊ အပေးအယူခံရသော၊ လျစ်လျူရှုထားသော၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ ဖယ်ရှားပစ်ရန်၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသော၊ အမုန်းပွားစေသော၊ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ အမှားအယွင်းများ၊ သည်းမခံနိုင်သော၊ စွန့်ထုတ်ခံရသော၊ ဂျက်စတိတ်၊ ၊ အမည်မသိ၊ စိတ်လှုပ်ရှား ၊ ရွှင်လန်း ၊ စိတ်ဝင်စား ၊ ဂုဏ်ယူ ၊ ဝန်ခံ ၊ ခိုင်ခံ့ ၊ ငြိမ်းချမ်းသော ၊ ရင်းနှီး သော ၊ အကောင်းမြင် ၊ ငြီးငွေ့ ၊ စိတ်ရှည် ၊ စိတ်တို ၊ စိတ်တို ၊ စွန့်ပစ် လိုက် ၊ အပြစ်ရှိ ၊ ရှောင်လွှဲ ၊ ကြောက်စရာ ၊ စိတ်ပျက် စရာ ၊ မနှစ်သက် ၊ ရိုင်းစိုင်း သော ၊ ခြိမ်းချောက် ခံရ သည် ၊ အိပ်ရာ၊ ငြင်းပယ်ခံရ၊ အကြောင်းအရာ၊ မသေချာ၊ စိတ်မရှည်၊ ကြောက်စရာ၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ အံ့သြမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ မကြိုက်မှု၊ ဒေါသ
အရောင်းအတွက် သံလိုက်ဘီး စတစ်ကာ
Next Magnet za točak emocija – bosanski
Previous Магнітнае кола эмоцый – Беларусь